Andriamanitra sy ny Siansa - Arkaeolojia. BNL Ministries - mg15
Andriamanitra sy ny Siansa - Index.
Andriamanitra sy ny
Arkaeolojia 1. Ny tena Tendrombohitry Sinay.
Arkaeolojia 2. Sodoma sy Gomora.
Zavamiaina bitika. Sela. Tsotra na Kojakojany?
Kôsmôlojia 1. Ny lanitra mitory...
Kôsmôlojia 2. Ny Firafitry ny Masoandrontsika dia tanora.
Paleontolojia. Angano momba ny Dinôzôro.
Haibolantany 1. Modely Biblika.
Haibolantany 2. Porofon’ny Safo-drano.
Andriamanitra sy ny Tantàra.
Daniela 5. Nofin'i Nebokadnezara.
Andro firavoravoan’i Belsazara.
Daniela 8. Nofin’i Daniela.
Ondrilahy sy Osilahy.
Daniela 9. Fito-polo herinandro...
Sambo Fiaran’i Noa. Ny toerana nisy ny Sambofiaran'i Noa.
Ny tena Tendrombohitry Sinay.
Ao amin'ny Faritra iray voadidin’ny rano antsoina hoe Sinai dia misy tendrombohitra atao hoe Tendrombohitry Sinay. Na izany aza anefa dia tsy ity tendrombohitra ity ilay iray voalaza fa nidinan’ny Tompo, na nandraisan’i Mosesy ny didy 10.
Ny tena Tendrombohitry Sinay dia miorina ao Arabia Saodita, ary na dia misy tsy fitovian-kevitra aza momba ny anaran’ity tendrombohitra ity, dia antsointsika hoe "Jebel el Lawz" izy, izay no niantson’i Ron Wyatt, Arkeology azy.
Jebel el Lawz, izay midika hoe "tendrombohitra amandy"(amandier), izay tsy misy volkano, kanefa ny vatolampy eo an-tampon'ny tendrombohitra dia niova loko ary mampiseho famantarana fa niharan’ny hafanana ambony be (niempo) izy, izay ny Tompo no nidina teo.
(Sary - ArkDiscovery.com)
Eo amin’ny fototr’ity tendrombohitra ity dia misy porofo maromaro, mampiseho fampiasana zavatra mandritra ny fe-potoana iray. Misy sary amin'ny vatolampy mampiseho ny andriamanitra Ejypsiana Horus sy ny omby, (ombalahy kely vita lasitra), Ary koa ny menorah. (fanaovan-jiro fito)
Tsy misy mahazo miditra amin’io toerana io, ny fefy manodidina azy, satria fitobian’ny miaramila Saodiana.
Hoy ny Soratra Masina ...
Rano avy amin'ny Vatolampy.
Meriba. Rano avy amin'ny Vatolampy.
Tao Meriba dia nisy vatolampy nisy fivakisana lehibe hatrany ambany. Ilay vatolampy dia 16 metatra ny haavony (na mihoatra).
Teo ampototr’ ilay vatolampy dia nisy porofo fa nisy ranobe nikoriana teo, nandritra ny fotoana ela.
Andriamanitra nitsinjo ny Olony, Israely, tamin’ny nanomezany rano avy amin’ny toerana faran’ izay sarotra indrindra mety hivoahan ‘izany rano izany.
Izany no mpitsinjo mahery.
6 “Ary, indro, hijanona eo anoloanao Aho eo ambonin'ny vatolampy any Horeba, dia hovelesinao ny vatolampy, ka hisy rano hivoaka avy aminy mba hosotroin'ny olona.” Dia nanao izany Mosesy teo imason'ny loholon'ny Isiraely.
7 Ary ny anaran'izany toerana izany dia nataony hoe Masa, sy Meriba, nohon’ ny filàna ady nataon'ny Zanak' Isiraely, satria naka fanahy ny TOMPO izy ireo: “Eto aminay va ny TOMPO, sa tsia?”
15 Namaky vatolampy tany an-efitra Izy, ka nampisotro azy nanaram-po tahaka ny amin'ny rano lalina.
16 Ary nampivoaka rano mandriaka avy tamin'ny harambato Izy ka nampirotsaka rano ho tahaka ny ony.
- Harambaton'i Sabino
to me. (PDF Anglisy)
Toko 13 Andriamanitra